संक्रमणबाट जोगिन दूध र बेसारको मिश्रण उपयोगी – Everest Dainik – News from Nepal
संक्रमणबाट जोगिन दूध र बेसारको मिश्रण उपयोगी
काठमाडौंः प्रायः गानो गएर पेट दुखेको बेलामा घरेलु उपचारको रुपमा हामीलाई परिवारका पाका सदस्यहरूले दुध वा दहीमा बेसार मिसाएर खान सुझाव दिन्छन् । यसले गानोको मात्रै नभएर यस्तै विभिन्न रोगहरुलाई निको पार्छ भन्ने कुरा चिकित्सकहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर, कसरी? वास्तवमा दुधमा बेसार हालेर खाँदा पौष्टिक मूल्य र औषधीय गुणहरू यसमा पर्याप्त पाइन्छ । यस्तो औषधीय गुणका कारण हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने गर्छ ।
यस बाहेक पनि संक्रमणको कारण बढ्दो रोगहरूको जोखिमलाई क मगर्न पनि यो घरेलु उपचार अति प्रभावकारी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो पनि भनिएको छ कि दुधमा एक चम्मा बेसार मिसाएर नियमित खाँदा हामी संक्रमणबाट जोगिन सक्छौं । दुध र बेसारको नियमित प्रयोग गरी कसरी संक्रमणबाट बच्ने त ? अनलाइन खबरबाट साभार
रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन के गर्ने?
बेसार र दुधको मिश्रणलाई नियमित पिउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन यसले मद्दत गर्छ । वास्तवमा, जब बेसार र दुध एकसाथ मिसिन्छन् । यसको मिश्रणले एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरिया र एन्टिफंगल एजेन्टहरुको रूपमा कार्य गर्दछ । त्यसपछि जब हामी यसलाई उपभोग गर्छौं । यी विशेष गुणहरूका कारणले यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्छ । यसले हामीलाई धेरै प्रकारका संक्रामक रोगहरूबाट बचाउँछ ।
घरमै कसरी तयार पार्ने यो औषधि ?
सानो चम्चाको एक चम्चा बेसार
दुध तताउने भाँडा
सबैभन्दा पहिले उमालेको दुधलाई ग्यास वा इन्डक्सनमा राख्नुपर्छ ।
जब दूध उम्लिन सुरू हुन्छ त्यसपछि यसमा एक चम्चा बेसार थप्नुपर्छ ।
यस मिश्रणलाई करिब ५ मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ ।
अब यसलाई हटाऔं र यसलाई चिसो हुन दिऔं । त्यसपछि यसलाई उपभोग गर्न सकिन्छ ।
दुध र बेसारका अरु फाइदाह?
दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा त्यसले प्राकृतिक तरिकाले कलेजोको बिषाक्त पदार्थ निकाल्छ । यसैले गर्दा रगत शुद्धीकरणमा पनि मद्दत गर्छ ।
ट्याग्स: दुध - बेसार